Kiristaanummaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 13:40 27 Adooleessa 202113:40 27 Adooleessa 2021
...tti maxxanfame 4:23 7 Adooleessa 20214:23 7 Adooleessa 2021
Waldaan himannaa sagaleen nu jeeqe jedhuun cufamte ol-iyyatte
Waldaan Makaana Iyyasuu Damee Faransaay Lagaasiyoon, iyyata nama dhuunfaa sagaleen waldittii keessa baha na jeeqeera jechuun dhiyeeffateen akka cufamtu murtee darbe mormuun mana murtii Federaala Olaanaa Dhaddacha Ijibbaataatti ol iyyannoo dhiyeeffatte.
...tti maxxanfame 4:07 10 Waxabajjii 20214:07 10 Waxabajjii 2021
Seenaa jireenya dubartii US beekamtuu hunda dhiistee monoksee taate
Bara 1928tti kan dhalatte Aan, durumaan hawwii monoksee ta’uu qabdi turte, ta’us garuu jaalalli ishee qabate.
...tti maxxanfame 8:00 6 Waxabajjii 20218:00 6 Waxabajjii 2021
Lallabaan beekamaan TB Jooshuwaa umurii 57tti addunyaa kanarraa boqotan
...tti maxxanfame 13:18 10 Caamsaa 202113:18 10 Caamsaa 2021
Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas tibbana ibsi kennan yaada dhuunfaasaaniiti malee Sinoodoosii ‘’bakka hin bu’uu’’ jedhame.
...tti maxxanfame 5:20 17 Ebla 20215:20 17 Ebla 2021
TB Jooshuwaa lallabaa wangeelaa beekamaa Afriikaati, qondaaltonni siyaasaa gameeyyiin hedduun horftoota isaati.
...tti maxxanfame 6:53 11 Bitooteessa 20216:53 11 Bitooteessa 2021
Manni murtii Kiristaanonni jecha 'Allaah' fayyadamuu danda’u jechuun murteesse
Morkii seeraa waggootii kudhaniif gaggeefamaa ture irratti, manni murti olaanaa Maleezhiyaa qajeelfama Kiristaanoonni Waaqayyoo jechuuf jecha ‘Allaah” jedhu akka hin fayyadamneef dhorku akka haqamuuf murteessera.
...tti maxxanfame 4:22 11 Bitooteessa 20214:22 11 Bitooteessa 2021
Shamarran butamanii amantii akka jijjiiranii heeruman taasifaman
Faaraah ijoollee ganna 12 yoo taatu mana warrashee Paakistaan irraa bona darbe butamte. Intalli kuni hidhamtee fuudhamteetu amantiishee gara Islaamaatti geeddaruun nama ishee butettti akka heerumtu taasifamte. Kuni carraa ijoollee amantii Kiristiyaanaa,Hinduufi Siik qaban dhibbaan lakkaa’amanii taheera.
...tti maxxanfame 12:33 5 Bitooteessa 202112:33 5 Bitooteessa 2021
Phaaphaas Firaansis daawwanaa seena-qabeessa taheen Iraaqa galan - kunis erga weerarrri koronaavaayiras eegale daawwanaasaanii idiladdunyaa isa jalqabaati.
...tti maxxanfame 14:42 19 Amajjii 202114:42 19 Amajjii 2021
Kabaja ayyaana Cuuphaa Magaalaa Naayiroobii suuraan
Itoophiyaan alatti biyyoota ayyaanni Cuphaa haalaan itti kabajamu keessaa tokko Magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii yoo taatu, gaazexessaan BBC Yaadataa Birhaanuu sirnicharratti argamuun suuraalee mimmiidhagoo kanneen kaaseera.